श्रीकृष्णको वर्ण किन निलो थियो ? | Sidha News
कृष्णको प्रत्येक छविमा निलो रंग अवस्य देखिन्छ । भनिन्छ, उनको वर्ण निलो थियो । एक व्यक्ति वा व्यत्तित्वको रुपमा उनीसँग किन यो निलो रंग जोडिन्छ ? यो रंगको विशेषता के छ ? जान्नुहोस् ।
तपाईलाई थाहा छ, यो संसारको जुनसुकै चीज पनि तपाईको सोचबाहिर छ , विशाल छ । त्यस्तै यो निलो रंगको अर्थ पनि विशाल बन्न आउँछ । निलो छ, चाहे त्यो आकाश होस् वा समुन्द्र । अनि त्यसैगरी, श्री कृष्ण भगवानको निलो छवि पनि विशाल छ, सोच बाहिर छ ।
भगवान कृष्णको शरीरको रंग निलो मानिन्छ । यसको अर्थ उनको छालाको रंग निलो थियो भन्ने होइन । जो व्यक्ति जागरुक थियो, उनलाई आफ्नो ऊर्जाको निलोपनले देखे र उनको वर्णन निलो वर्णको रुपमा गरियो ।
कृष्णको स्वाभाव नै यस्तो थियो कि उनी सबैलाई एकसाथ अघि बढाउन चाहान्थे । उनी विशाल थिए । श्रीकृष्णको प्रभावमंडलको सबैभन्दा बाहिरी आवरण नै निलो थियो भन्न सकिन्छ, त्यसैले उनमा गज्जबको आकर्षण थियो । यो गज्जबको आकर्षणको कारण उनको पातलो नाक वा सुन्दर आँखा हुँदै होइन ।